ရောင်​နီဦး: နုပျိုမှုကို အစဉ်ထိန်းထားနိုင်စေမည့် အစားအစာ ငါးမျိုး
နုပျိုမှုကို အစဉ်ထိန်းထားနိုင်စေမည့် အစားအစာ ငါးမျိုး
အသက်ကြီးလာတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ မောပန်း နွမ်းနယ်တာတွေကြောင့် သင်ရဲ့ အသွင်အပြင်က မရွှင်မပျဖြစ်ကာ ရှိသင့်တဲ့ အသက်ထက် ပိုတယ်လို့ ထင်မြင်စေပါတယ်။ အောက်ပါ အစားအစာငါးမျိုးက
သင့်ကို နုပျိုတဲ့အသွင်အပြင် ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ လူတင်းဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ လူတင်းက မျက်စိအားကောင်းပြီး ကျန်းမာစေရုံသာမကဘဲ အရေပြားစိုစွတ်မှုနဲ့ ဆွဲဆန့်အားတွေကို ထိန်းထားပေးနိုင်တယ်။ ဖရီးရေဒီကယ်တွေရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို လတ်တလော လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာ ဗီတာမင် ကေနဲ့စီတွေ များစွာပါဝင်တာကြောင့် မျက်လုံးအောက်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ မျိုးရိုးလိုက်တာ စတဲ့မျက်ကွင်းညိုစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ များစွာရှိပေမယ့် အဓိက အကြောင်းကတော့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက် သွေးလှည့်ပတ်မှု နည်းတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင် ကေနဲ့စီ များစွာပါဝင်တဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက် စားပေးပါက သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး သွေးကြောနံရံတွေကို အားကောင်းစေပါတယ်။
အသားအရေ ဖြူဖျော့ဖျော့ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတယ်
ကမာကောင်က သင်ရဲ့အလှတရား ပြီးပြည့်စုံဖို့ အထောက်အပံ့ ပေးပါတယ်။ သင့်အသားအရေက ဖြူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြူဖျော့ဖျော့ ဖြစ်နေတာ ဒါမှမဟုတ် မျက်ကွင်းညိုနေတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂ နဲ့ သံဓာတ်တွေ ချို့တဲ့နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံး ဖြစ်နေရင်တော့ သွေးအားနည်း ရောဂါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကမာကောင်မှာ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂၊ သံဓာတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ သွေးအား ကောင်းလာစေပါတယ်။ ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်၊ ယောက်သွား၊ ခရု စတာတွေကလည်း ကမာကောင်လိုပဲ အကျိုးများစေပါတယ်။
ဝက်ခြံကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတယ်
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ပိုးသတ်အာနိသင်၊ သွေးတွင်း သန့်ရှင်းစေကြယ်စေတဲ့ အာနိသင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို အိမ်တွင်းမှာ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပြီး ဝက်ခြံကုသရာမှာလည်း ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် ဝက်ခြံကြောင့် ရောင်ရမ်းမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတယ်
ထောပတ်သီးမှာ အဆီများတယ်ဆိုပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေတဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်ပြီး အသားအရေကိုလည်း လှပစေပါတယ်။
ထောပတ်သီးမှာ အိုမီဂါ-၃ အဆီပါဝင်ပြီး အသားအရေ စိုပြည်စေပါတယ်။ အရေပြား တင်းရင်းစေတဲ့ ကိုလာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပြီး အရေးကြောင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးရဲ့ ရောင်ရမ်းမှု လျော့နည်းစေတဲ့ အာနိသင်က ဝက်ခြံဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ဆိုရီရေးစစ် အရေပြားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထောပတ်သီးမှာ ဗီတာမင်အီး ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေ လှပစေပြီး အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရေဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးတယ်
ခန္ဓာကိုယ်က ရေကို ပြန်ဆွဲထားတာကြောင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ လေပွတာကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး။ သင့်မျက်နှာ ဖောင်းအစ်တာ၊ မျက်အိတ်ရောင်တာတွေပါ ဖြစ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုတက်စီယမ်နည်းပြီး ဆိုဒီယမ် (ဆား) များနေပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ပိုလျှံနေတဲ့ရေတွေ အပြင်ပြန်မထွက်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်ဆွဲထားတတ်ပါတယ်။ ငှက်ပျော်သီးက ဆိုဒီယမ်-ပိုတက်စီယမ် ပမာဏကို ညှိပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဆွဲအားကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်စီယမ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ငှက်ပျောသီး စားပေးပါက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆိုဒီယမ်-ပိုတက်စီယမ် ပမာဏကို ညှိပေးပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ဖရဲသီး၊ သင်္ဘောသီးတွေကနေလည်း ပိုတက်စီယမ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted by YaungNiOo at 7:23 PM
မှာစရာရှိရင်​ Chat box မှတဆင့်​ မှာခဲ့ပါ
သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အာဟာရပြည့် အလှအပသုံး ဒန့်သလွန်တပင် လ...
3D Max software
ရင်အုံဖြိုးမောက် မြင်သူကျလောက် (ယောက်ျားများအတွက်သ...
Samsaung Android မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းလေးပါ
နုပျိုမှုကို အစဉ်ထိန်းထားနိုင်စေမည့် အစားအစာ ငါးမျိ...
သုံးကြည့်သင့်တဲ့ သီချင်းသံပါတဲ့ Gtalk အလန်းဒီဇိုင်...
သင့်ကွန်ပြူတာ အတွက် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ
လူသိနည်းသော ကွန်ပျူတာ အကြောင်းလေးများ
A သွေး B သွေး O သွေး AB သွေးများ၏ .ထူးခြားချက်များ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းတွေ့ရသော ချင်းတောင်တန်းနေ နာဂ...
နာဇီတို့၏ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သံလမ်းပေါ် တင့်ကား
အလင်းနှစ်ပေါင်း သန်း ၂၀ အကွာ၌ လူသားမျိုးနွယ်များ နေထိုင်နိုင်ပြီး လေ၊ ရေ နှင့် သဘာဝ တရားများ ပြည့်စုံသည့် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခု တွေ့ရှိ
ကမ္ဘာသစ် တစ်ခုတဲ့လား.... ဟု မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်နေရလောက်သော အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု အသစ်တစ်ခုက အဖြေတစ်ခု ရလာခဲ့ပြီ ဖြ...
ဂျီးမေးလ်အကောင့် ခိုးနည်း နှင့် ကာကွယ်နည်း
ပထမနည်း ၁။ ဂျီမေးလ်အကောင့် Page ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ၂။ ဘာ အီးမေလ်၊ Pasword မှ ရိုက်မထည့်ပဲ I can’t not access to my account ဆိုတာလေးကို ရေ...
A သွေး B သွေး O သွေး AB သွေးများ၏ .ထူးခြားချက်များ
... " A "သွေးပိုင်ရှင်များ ၏ထူးခြားချက် အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ..ငယ်စဉ်ဘ၀မှာတော့ သူတပါး ကို...
ဆယ်ကျော်သက်များရဲ့ ဘုံရန်သူ ( သို့မဟုတ် ) ဝက်ခြံ
ဝက်ခြံ မိတ်ဆက် ဝက်ခြံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် ငယ်ဘဝက စပြ...
ကိုယ်တိုင်လည်းဖက် တစ်ဆင့်လည်း မျှဝေပေးကြပါ
အရေးမထာမှု့(သေးသေးလေး) မှ ကြီးကျယ်သော ဆုံးရုံးမှု့ ကြီးသို့ ပြောင်းလဲသွားသည့် (အကြီးအကျယ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့) အဖြစ် ရောက်ရှိရသည့် အခြေ...
သင်္ဘောသီး အသား ဖြင့် အလှပြင်ခြင်း
သင်္ဘောသီးအသားက အစေးနဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်တိုက်ပေးရင် (၁) သင်္ဘောသီးဟာ မျက်နှာပြင်က အမည်းစက်တွေကို ကင်းစင်ပြီး မလှမပနဲ့ ၀ါဖန့်ဖန့်အသားအရည်က...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းတွေ့ရသော ချင်းတောင်တန်းနေ နာဂလူမျိုး တိုင်းရင်းသူတစု
ချင်းတောင်တန်းနေ နာဂလူမျိုး တိုင်းရင်းသူတစု။ ဆက်လက်ဖတ်လိုက်ပါအုန်းခင်ဗျာဗဟုသုတရနိုင်ပါတယ်
ပထမအချည်နဲ့အားလုံးလဲကုန်ပြီ။တို့မမ ကတော့ အေးဆေးပဲ...ဟဲ
David Bacon English Myanmar Typing Tutor 5
Channel Myanmar Movies
Myanmar Blogger Guide
Discovery Channel 99
share​ ​ပေးခြင်းဖြင့်​ ကူညီ ပါ
Facebook page ​လေးကို Like ​ပေးခဲ့ဦး​နော်​
Yaung Ni Oo
share ​ပေးခြင်းဖြင့်​ ကူညီပါ
ဓါတ်ပုံ effect လုပ်ရန်
မိမိဆိုဒ်မှာ button လေးတွေထားချင်ရင်
မိမိဓါတ်ပုံကို slideshow လုပ်ချင်ရင် (1)
မိမိဓါတ်ပုံကို slideshow လုပ်ချင်ရင် (2)
​ရောင်​နီဦး thihayesoe@gmail.com. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.